Amaphupho ngokuhamba ngezinyawo – iAfrika
Uma uphupha ukuthi uhamba ngezinyawo kujwayele ukuba uphawu olubi. Kusho ukuthi uzobhekana nezikhathi ezinzima empilweni yakho nosizi ebudlelwaneni bakho nabanye ikakhulukazi uma ungcolile ephusheni lakho.
8 thoughts on “Amaphupho ngokuhamba ngezinyawo”
Kusho ukuthini ukuphupha ukulayini kodwa uncina ungafikanga
ukuphupha umuntu ehamba ehubuluza ngesisu kuchazani.
Cofa lapha ukuthola incazelo Amaphupho ngokuhamba
Cela ukubuza kusho ukuthini ukukhohlwa ukufaka icathulo ephupheni uhambe ngezinyawo?
Ngicela ukubuza kusho ukithini ukuphupha ubuya eskolen Koda uhamba ngezinyawo futhi kuyanetha
Nanku udaba esinalo ngalokho: https://iafrika.org/amaphupho-ngemvula/
Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha uhamba ngezinyawo kodwa besibaningi sibambe ulayini ngathi ngithi ey kuqeda kufakwa itiyela awthi ngizwe ukuthi alishisi yin ay ngithole ukuthi alishisi kuthe kusenjalo kuqhamuke umuntu ongikweledayo anginike imali yamaphepha eningi